Barruun Afaan Oromoo gurguramuuf danqaman!
Guyyaa kaleessaa kana Magaalaa Naqamtee keessatti barataa Yunivarsiitii Wallaggaa damee qonnaarraa baratu tokko warri 'security' barruulee kanneen akka Qabsoo Oromoo Eessaa Karam?, Kooticha kota'ame, SAFUU, SIIFSIINII, kitaabota asoosamootaa hedduufi FI barruulee afaan Oromoo hedduu harkaa fudhatanii konkolaataan fudhatanii erga deemaniin booda, sibiilaan reebanii boolla keessatti dabachuun du'aaf jireenya gidduutti dhiisanii sokkaniiru.
Kuno biyya Oromoo keessatti kitaaba Oromoo gurguruun dhorkamamee jira. Iddoo hundaatti reebichaafi dararsa duwwaa ta'eera. Maaloo ijoolleen qubee gubachaa jirra. Barruun Oromoon barreessaa jirru marti warra gurguraa jiran irraa fudhatamuun cinatti nannoo Bishooftuutti halkan tokkichatti utuu barruun siifsiin gurguramaa jiruu gara nama 76 gaaf tokkicha qabanii mana hidhaa bulchanii guyyaa lama booda gadhiisan.
Yeroo ammaa kana kitaaba afaan Oromoo akka galaanaa burqaa jiran gurguruun dadhabamee jira. Dargaggoonni baay'een kasaaraa gurguddaa keessa seenuun cinatti dhaloonni qubee amma kitaaba barreessuurratti argaman akka waraabessa nama nyaatuutti adamfamaniitu kunoo tatamsa'anii baay'ee isaanii iddoo isaan bu'an dhabnee jirra. maaloo jamaa biyya ofiirratti afaan ofii guddisuu yeroo dadhaban maaloo maal wayya jettu?
Kitaabni Oromoo waa'ee Oromoo bakka bu'ee dubbataa wan jiruuf xiyyeeffannoo guddaan itti kennamee godinaalee Oromiyaa maratti reebichaafi adamsi gurguddaan ta'aa jira.
Mee maaloo Qammolee fi dhabileen Oromoo wayeen Oromoo na ilaalta jeedhu hundi bala Oromummaa fi Oromoo irrati agamatee kana dhabsisuuf sagalee iyya keenyaa qaama ilaallatu maraaf nuuf dabarsaa Jeechuun iyyataa jiru.
Gummi Paarlamaa Oromoo yaakkaa Ijoole Oromoo domisuu fi Oromummaa baleesuuf dalagama jiru kan cimmisee balaleefata. Mootumman Ethiopia fi OPDOn gochaa baleesi sanyi Oromoo irrati rawwatan kan atataman akka irraa of qusatan gaafana. Keesumatu yeero ama kana Nafxanya Haraa fi Nafxanya moofan yeeroo isaan dulaa biyya keessa fi biyya alan Oromoo irrati banan kana OPDOn barartoota Oromoo kununsun ofti qabuu dhisee, beekaa Oromoo hunda diina goodhachuun, diina cinaa ijoole Oromoo akka hiriran goochuu isaa beeke OPDOn siyyasa adeemsisaa jiru of duba deebiyee akka ilaluu hubachifna. OPDOn lammi isaa diina ofti goochuu irra of qusachuu qaba jeena. Ethiopia namoon Muraasi akka barbadan saamaa jiranti ijoole Oromoo Kitaba rakkatan maxansifatan kana gurgurachuu dhorkamuu hin qaban. Afaan Oromoo fi Oromummaa gudisuu dhorkun yaakkaa dudugaa sanyii baleesun akka gaafa tokko nama gafachisuu beekuu qabu.